NOD32 Antiviurs3ကို Offline Update လုပ်ရအောင် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
NOD32 Antiviurs3ကို Offline Update လုပ်ရအောင်
ပို့စ် 23 ခုအတွက် 170 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
NOD32 Antivirus3ကို Offline Update လုပ်နည်းလေးတွေ့လို့တင်ပေးတာပါ။
www.nod32kye.com ကရတာဖြစ်ပါတယ်။ China ဆိုက်နဲ့တူပါတယ်။
အဆင့်(၁) Offline Update Database ကို Download ပြုလုပ်ရန်
့(၁) Google ရဲ့ Search ထဲမှာ www.nod32key.com လို့ရိုက်ပါ။
(၂) Translate this page ကိုနှိပ်ပါ။ www.nod32key.com ရဲ့ English ဘာသာ ပြောင်းထားတဲ့ ဆိုက်တက်လာပါမယ်။
(၃) [Top] NOD32 Collection of Frequently Asked Questions ကိုနှိပ်ပါ။
(၄) NOD32 version of the off-line to download updates ကိုနှိပ်ပါ။
(၅) Version 3.0 products offline update package to download Address ကိုနှိပ်လိုက်ရင် offline.rar ဆိုတဲ့ Update file ကို Download လုပ်လို့ရပါတယ်။
အဆင့်(၂) Download လုပ်ပြီး offline update ကို NOD32 Anitviurs တွင် Update ပြုလုပ်ရန်
(၆) offline.rar ဖိုင်ကို Download လုပ်ပြီးရင် C:\_ ရဲ့အောက်မှ Extract လုပ်ပါ။
(၇) NOD32 Antivirus ကိုဖွင့်ပါ။ F5 ကိုနှိပ်လိုက်ရင် NOD32 Antiviurs ရဲ့ Setup Box တက်လာပါမယ်။
(ဂ) Update ကိုနှိပ်ပါ။ Setup ရဲ့ Update Tab ကိုရောက်ပါမယ်
(၉) Edit ကိုနှိပ်ပါ။ Update server list Box တက်လာပါမယ်
(၁၀) Update servers: ဆိုတဲ့နေရာမှာ C:\_offline လို့ရိုက်ပြီး Add ကိုနှိပ်ပါ။ Ok ကိုနှိပ်ပါ။ Ok ကိုဆက်နှိပ်ပါ။
(၁၁) NOD32 Anitvirus ရဲ့ Update Tab မှာ Update virus signature database ကိုနှိပ်ပါ။
(၁၂) Database Files တွေကို NOD32 Antivirus က Update လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
(၁၃) Update Prograss ပြီးသွားရင် NOD32 Anitviurs ကို Update လုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အခုသုံးနေတာက NOD32 Anitviurs 3.0.667 ပါ။ Update ကိုတင်ကြည့်တာ ၂ရက်လောက်နောက်ကျတာကလွဲလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် မရှိတဲ့ စက်တွေကိုတင်နိုင်အောင်ပါ။
Last edited by ကျော်ကိုထက်; 16-10-2008 at 10:47 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ ကျော်ကိုထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ထွန်းဝင်းနိုင်, ကျော်ခန့်ဇော်, မောင်ဇော်ဇော်အောင်, မောင်ပေါ်ဦး, arkar98, blackNwhite, ko myo, lagood, linlinaung, maJunior, Myo Min Zin, NNGC, peacelover, phoepa1982, phyomyintthein, tikeye, tu tu, zo
Find More Posts by ကျော်ကိုထက်
17-02-2009, 06:26 AM
ပြန်စာ - NOD32 Antiviurs3ကို Offline Update လုပ်ရအောင်
nod32 ကို ဘယ်မှာဒေါင်းရမလဲဗျာ ကျွန်တော်ဒေါင်းတာ trail vertion ပဲရတယ် လိုင်စင်ရှိရင်ကူညီပါအုံး
သက်နိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, blackNwhite, mee mg, zo
ဂျူနီယာအိမ်က စက်ကို offline.rar ကို ဒေါင်းပြီးနေ့စဉ် update ပါတယ်..
ဗားရှင်း4ပါ.. update ဖိုင်အဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်....ခုရက်ကျတော့မှ offline ဖိုင်ကိုဒေါင်းလို့မရတော့ပါဘူး..
ပို့စ် 53 ခုအတွက် 131 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
NOD32 offline Update ကဘာလို့ ဆွဲလို့မရတော့တာလည်းဗျ... Network Error ဆိုတာချည်းပဲ ပြနေတယ်... ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လား... ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆွဲထားတဲ့ Update က ၃-လပိုင်း ၂၀၀၉ မှာဗျ... Version3Offline Update file နောက်ဆုံးဆွဲမိခဲ့တဲ့သူများရှိရင် မျှဝေပေးပါဦးဗျ..........
..... Peace be with you all .....
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ peacelover အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Version3Offline Update file နောက်ဆုံးဆွဲမိခဲ့တဲ့သူများရှိရင် မျှဝေပေးပါဦးဗျ.
offline update download လို့ရတဲ့ site တွေပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ phyomyintthein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ထွန်းဝင်းနိုင်, ဇော်ရဲပိုင်, blackNwhite, maJunior, NNGC, peacelover, tu tu, zo
လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ Download လုပ်လို့မရတာ ဘာဖြစ်တာလည်းဗျ... ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လား.. သူ့ရဲ့ဆိုဒ်ကြောင့်လား... ခေါင်းပူတယ်စိတ်ရှုပ်တယ်
19-07-2009, 11:19 PM
Download လုပ်လို့မရတာ ဘာဖြစ်တာလည်းဗျ... ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လား.. သူ့ရဲ့ဆိုဒ်ကြောင့်လား... ခေါင်းပူတယ်စိတ်ရှုပ်တယ်
connection ကြောင့်ပါ။ အောက်ကလင့်ကနေ ကျွန်တော် download လုပ်တာ ရပါတယ်။
နောက်ထပ်လင့်တွေရှာပြီး ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်။ တစ်ခု မရ/ တစ်ခုပေါ့။
အောက်ကလင့်မှာ download 1၊ download 2၊ download3ဆိုပြီး လင့် ၃ ခုစီလောက် ပေးထားတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ phyomyintthein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ထွန်းဝင်းနိုင်, blackNwhite, maJunior, peacelover, zo
network error တဲ့..လုပ်ကြပါအုံး..............................................................................................
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကြည်နူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကြည်နူး
မကြည်နူးခင်ဗျာ လင့်တွေက ကျွန်တော် ဖွင့်တာ ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ error မပြပါဘူး။ ကွန်ရှင်ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတော့မှ သုံးကြည့်ပါဦး။ အဆင်ပြေပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ blackNwhite အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 40 ခုအတွက် 166 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကူညီကြပါအုံးဗျာ... ရှာတာလဲ နေရာစုံနေပြီ ... NOD32v4( 4661 ) Offline နေ့စဉ် Update လေးကို ဘယ်မှာ သွားဒေါင်းလို့ရနိုင်မလဲဗျ...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဖိုးကောက်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဖိုးကောက်လေး
ဟီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်းပြီး ကိုယ့်ဖာသာ ပဲပြန်တင်ပေးလိုက်တော့မယ်ဗျာ... နောက်လူတွေအသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ပါ ကျွန်တော်ရှာတွေ့တာတွေ ကအောက်ကလင့်တွေ မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်နော်..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ဖိုးကောက်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ဇာနည်မောင်, ထွန်းဝင်းနိုင်, ပုထုဇဉ်, ဖြိုးယံလေး, bonge, zo
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်က eset smart security4ကိုသုံးထားတယ်ဗျ အဲ့ဒါ nod32 update နဲ့တူသလားမသိဘူး
မတူဘူးဆိုရင် eset smart security4offline update ဒေါင်းလို့ရမယ့်ဆိုင်လေး ညွန်ပေးပါဦး အစ်ကို
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ nawkhae အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by nawkhae
ဒီနေရာမှာ သွားရောက်ဒေါင်းလုဒ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒီမှာ Eset နဲ့ပက်သက်တဲ့ Offline Update တွေကို Mediafire ကနေ တင်ပေးနေတာ တွေ့ပါတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတွေကိုလည်း Video တွေ၊ ပုံတွေနဲ့ပြထားပါတယ်။ စာလေးတွေတော့ သေချာဖတ်ကြည့်ပြီးမှလုပ်ပေါ့။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
ဆီကျော်, မောင်ပေါ်ဦး, g00gle, PyaitSone, tu tu, victor10, zo
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အစ်ကိုရေ ဖွင့်လို့ရဘူးဗျ The access to requested URL has been denied. "http://esetupdates4u.blogspot.com/2010/08/eset-offline-update-5365-august-14-2010.html" ပြပြနေတယ် ကူညီပါအုန်း
ကျွန်တော် အဲဒီကပိုစ့်ကို ကူးယူဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
I have used almost every anti-virus/internet security software and every anti-virus is good to some extent.....But for me, Eset topsdlist.......It is very simple n incredibly very fast....But it is very important to update it onaregular basis....Officially ESet doesn’t hvdfeature of offline update.....So m sharing offline updates wid u.....Update regularly coz thousands of new virus r born/invented every day.
NOD32 Smart Security (all versions)
NOD32 Antivirus (all versions)
Eset Offline Update 6676 (December 1, 2011)
#1 Right -click on the file "eset_u6xxx_esetupdates4u.blogspot.com", then select "extract here"..
#2 Open the newly created folder and copy its address..
#3 Open eset and press F5,anew set up window will open..
#4 On the left side, there willbsome categories....Scroll down and click on “Update”
#5 On the right side, click on “Edit” and paste the address of the folder in the “Update Servers” directory.. Click on “add” and then “ok” twice to return to the eset ..
#6 Click on “Update” and then “Update Virus Signature Database”…
Last edited by bagothar85; 02-12-2011 at 07:55 AM..
မြန်အောင်သား, phyomyintthein, PyaitSone, zo
အစ်ကိုရေ eset u6671 ကဒေါင်းလို့မရဘူး eset u6450 ပဲရနေတယ် အစ်ကို အဆင်ပြေ ရင်တော့ update ကို အစ်ကိုပြန်တင်ပေးပါလို့ ပဲတောင်းဆိုပါရစေ အစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော် အပေါ်ပိုစ့်မှာ မနေ့ကမှ အသစ်ထွက်တဲ့ Eset u6676 ကို တင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
nawkhae, tu tu, zo
ကျွန်တော်လုပ်တာက ဘာလို့ စာမျက်နှာမပေါ်ပဲ The access to requested URL has been denied. "http://esetupdates4u.blogspot.com/2010/08/eset-offline-update-5365-august-14-2010.html" အဲ့ဒါလို ပြနေတာ
ဘာကြောင့်လဲ အစ်ကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ပြန်ပြိးဒေါင်းလုပ်ချင်လို့ပါ ဘာလိုပါသလဲဆိုတာကို ညွန်ပေးပါအစ်ကို
eset offline update လိုချင်သူများ အတွက် ဒီလင့်ကိုပဲမှတ်ထားပါ http://www.browsertunnel.info/page/0...31302e68746d6c
ဒီလင့်က နောက်ဆုံး update ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်
phyomyintthein, zero6, zo